घण्टौदेखिको प्रयास अ’सफल , बो’रवलभित्रै* सुजितको नि’धन !::Point Nepal
घण्टौदेखिको प्रयास अ’सफल , बो’रवलभित्रै* सुजितको नि’धन !
एजेन्सी-तमिलनाडुको त्रिची शहरको नाडुकापट्टी गाउँमा* बोरवेलमा खसेका दुई वर्षीय सुजित विल्सनलाई ब’चाउने कोसिस अ’सफल भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यामहरुले सरकारी अधिकारी जे* राधाकृष्णनलाई उ’द्धृत गर्दै बच्चाको श’व नि’काल्न उ’द्धार टो’ली अ’सफल भएको जनाएका छन् ।सरकारी अधिकारी जे राधाकृष्णनका अनुसार बालकको श’व बो’रवोलभित्रै स’डेको अ’वस्थामा *रहेको छ। उनका अनुसार बच्चा ख’सेको बो’रवेलमा अब ग’न्ध आउन थालेको छ। उनले भने, ‘यो धेरै दु’र्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।’
यद्यपि, बीबीसीका सम्वाददाता हरिहरनका अनुसार बच्चाको श’व ह’टाइएको छ । शुक्रबार भएको यो घ’टनापछि बालकलाई ब’चाउन प्रहरी, आपतकालीन उ’द्धार कोषका* उद्दारकर्मी, द’मकल विभाग, स्थानीयवासी लगायत ख’टेका थिए । तर उनीहरुको प्रयास अ’सफल भएको छ । दुई वर्षी बालक सुजितको बो’रवलभित्रै नि’धन भएको छ ।घ’टना भएलगत्तै प्रहरी, दमकल विभाग र स्था’नीयवासीहरुको स’क्रियतामा बच्चालाई पाइपमार्फत अक्सिजन प्र’दान गरिएको थियो । त्यसलगत्तै राष्ट्रिय वि’पत्ति विभागको *फोर्सले बच्चाको अवस्था ट्र्या’क गर्न बोरवेलमा सीसी क्यामेरा समेत ज’डान गरेका थिए ।
भारतका ए’नडीआरएफ र राज्य प्र’कोप व्यवस्थापन बलका* टो’ली पनि सुजिलाई ब’चाउन स’क्रिय थिए । घण्टौसम्मको उनीहरुको प्रयास अन्ततः अ’सफल भएको छ ।घ’टनालगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले* सुजितलाई ब’चाउन कुनै कसर बाँकी नराख्न उ’द्दार टो’लीलाई आ’ग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले बालकलाई जसरी पनि उ’द्धार* गर्न मुख्यमन्त्री लगायतलाई समेत नि’र्देशन दिएका थिए ।भारतका धेरै अधिकारीहरू, राजनीतिज्ञ, सेलेब्रेटी र सर्वसाधारणहरूले सुजितलाई ब’चाउनका लागि सोशल मिडियामा प्रार्थना गरिरहेका थिए ।